रिलका निर्देशक, रियलका चियावाला
काठमाडौंको शंखमूलबाट बागमती करिडोर हुँदै तीनकुने निस्किँदा सडकको दायाँतिर एउटा ‘अजिब’को चिया पसल छ, ‘चियावाला ।’
बिहान साढे ८ बजेतिर त्यही चिया पसलको गेटमाथि झुन्ड्याइएको सानो पुरानो चियादानी (किट्ली)ले मलाई स्वागत गर्‍यो । गेटबाट भित्र छिर्नेवित्तिकै मैले चारैतिर आँखा डुलाएँ ।
आहा ! वास्तवमै कमाल लाग्यो । ‘चियावाला’को चर्चा त मैले सुनेको थिएँ तर त्यहाँ पुगेको थिइनँ । पुराना र बिग्रिएका घरायसी सामान, ग्याजेट्सलाई कसरी आकर्षणका रूपमा सदुपयोग गर्ने, त्यहाँ पुगेपछि सोच्न बाध्य भइन्छ । काठका मूढाहरूको बीचमा बिग्रिएको वा पुरानो टीभी वा डेस्कटपको स्क्रिनतिरको भागलाई चिया राख्न मिल्ने गरी ‘टी टेबल’का रूपमा प्रयोग गरिएको छ । पुराना र नेपाली मौलिक सामानहरूले सिँगारिएको छ, चियावाला क्याफे ।
भित्ता र काउन्टरका पिलरले भनिरहेका छन्, ‘सेल्फ सर्भिस, पे फर्स्ट । नो वाइफाई । ट:क टु इच अदर । मेरो खुसी चिया । दाइ नभन्नू ल !’
पिलरमा लेखिएकामध्ये घत लागेका शब्द, ‘केही मीठा बात गर, वाइफाई त घरमै होला ।’
त्यो पिलरले मलाई नै थर्काएजस्तो लाग्यो, होटलमा जानेवित्तिकै वाइफाई कनेक्ट गरेर घोप्टिने बानी जो छ । लाग्यो, यो त ‘ह्याङआउट’को थलो नै हो ।
चियावालाभित्र राखिएका हरेक वस्तु र चित्रभित्र कथा देखिन्छ । एउटा ठूलो अचानोमाथि बुद्धको मूर्ति राखिएको छ । अचानो अर्थात् मासु काट्ने ठाउँमा बुद्ध अर्थात् शान्तिका प्रतीकको मूर्ति ! अनौठो होइन त ?
आफ्नी छोरीले सानो छँदा चढेको साइकलको सिटमा काठको तख्ता राखेर क्याफे सञ्चालकले टेबल बनाइदिएका छन् । ग्राहकहरू त्यसैमा रमाईरमाई चियाको प्याला उठाइरहेका देखिन्थे ।
भित्र छिर्नेवित्तिकै देब्रेतिरको भित्तामा चित्रकार अरविन्दले बनाएको एउटा चित्र छ, जहाँ १२–१३ वर्षजतिकी बालिका र ६० वर्ष नाघेकी लाग्ने वृद्धाले कपमा चिया हालिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
वास्तविक जीवनमा पनि चित्रमा देखिएका हजुरआमा र नातिनी काठमाडौंकै वसन्तपुरमा चिया बेचेर जीवन चलाइरहेका छन् । त्यहाँ गएर मैले पनि चिया पिएको छु ।
वास्तवमा कुनै बेला म पनि चिया/कफीको सोखिन नै थिएँ तर हिजोआज अलिक कम पिउँछु । युनिभर्सिटी अफ ग्लासगो र न्यु इङ्ग्ल्याण्ड जर्नल मेडिसिनले गरेको अनुसन्धान रिपोर्ट मैले पढेको थिएँ, जहाँ उल्लेख थियो, ‘चियामा पाइने ट्यानिन, टायलिन र फ्लोराइडले शरीरलाई हानि पुर्‍याउँछ ।’
उक्त रिपोर्ट कति विश्वसनीय थियो, मलाई थाहा भएन तर मैले चिया पिउन कम गरेँ, बाआमाको एक्लो छोरो जो परेँ । आफ्ना लागि नभए पनि बाआमाका लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपरिहाल्यो !
यद्यपि, चियावाला क्याफेमा बिहानै देखिएको भीडले भनिरहेको थियो, ‘जेजस्तो होस्, दिन त मीठो चिया पिएरै सुरु गर्नुपर्छ ।’
बिग्रिएका टेलिभिजन र डेस्कटपको स्क्रिनमाथि कुहिनो राखेर काठको मूढामा बस्दा कताकता गाउँतिरै छु कि जस्तो महसुस भयो । वरिपरिको दृश्य नियाल्दा कुनै म्युजियम वा आर्ट ग्यालरीमा बसिरहेको छु जस्तो लाग्यो ।
आँखा घुमाएर उभिइरहेको थिएँ, क्याफे सञ्चालक ‘वेलकम टु चियावाला’ भन्दै आए ।
‘कुन चिया पिउनुहुन्छ ?’, उनले सोधे ।
वास्तवमा चिया केवल चिया होइन, यो भावना पनि हो । यसमा सद्भाव, सत्कार, मित्रता धेरै कुरा हुन्छ । सिधै पिउँदिनँ भन्दा धेरैतिर असर पर्न सक्छ । यही सोचेर जवाफ फर्काएँ, ‘ब्ल्याक टी प्लिज !’
चियाको नाम पनि के भनौं, ५० थरीका चिया त्यहाँ पाइँदो रहेछ ।
छेउमै आएकी नानीले सोधिन्, ‘विथ लेमन अर... ?’
‘तातो हुनुपर्‍यो, जस्तो ल्याए पनि हुन्छ’, मैले ठट्यौली जवाफ दिएँ । नानी मुस्कान छाड्दै काउन्टरतिर बटारिइन् । छेउछाउमा चिया पिइरहेकाहरू गलल हासेँ ।
काउन्टरमा गएर म आफैँले ब्ल्याक र मिल्क गरी २ कप चिया लिएर आएँ, एउटा आफूलाई, अर्को क्यामेरा पर्सन सुशील दाइलाई । ब्रेड राखिएको एउटा प्लेट बोकेर आए चियावाला, जसको प्रतीक्षामा थिएँ म ।
उनका बारेमा थोरबहुत अध्ययन गरेकाले मैले उनी सामु एकरत्ति औपचारिकता प्रकट गरिनँ । कुरा गर्दै जाँदा शान्त र सरल लागे पनि बाहिर देख्दा उनी अलिक ‘रफ’ लाग्छन् ।
ती चियावाला अरू कोही नभएर चलचित्र लेखक तथा निर्देशक गणेशदेव पाण्डे हुन् । १२ वर्षयता चलचित्र लेखन तथा निर्देशनमा काम गरिरहेका गणेशको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो नै चियावाला क्याफे हो, जुन उनको सोख र बाध्यता दुवै हो ।
‘बाँच्नकै लागि त मैले चिया पसल गरिरहनुपर्दैन थियो’, उनी भन्छन्, ‘सोख मात्र भन्नलाई मैले जिउने आधार पनि यही क्याफेलाई नै बनाएको छु । त्यसैले सोख र बाध्यता दुवैको उपज हो चियावाला ।’
‘मालतीको भट्टी’, ‘मञ्जरी’ र ‘गाँजाबाजा’ उनले निर्देशन गरेका चलचित्र हुन् भने ‘चिनी कम रङ कडा’ उनले लेखेको चलचित्र हो । कतिपय मानिस ‘सानो’ भन्दै आफ्नो पेसा खुलाउनै हिचकिचाउँछन् तर ठूलो पर्दाका ४ वटा चलचित्र बनाइसकेका गणेश गर्वका साथ भन्छन्, ‘अफकोर्स, आई एम चियावाला ।’
उनलाई चियावालाको छोरा, नाति हुनुमा गर्व छ भने चियावाला हुनुमा घमण्ड छ ।
उनका हजुरबुबा पनि चिया बेच्थे । बुबा घनश्यामले बुटवलको अमरपथमा करिब ४० वर्षसम्म चलाएको चिया पसललाई अहिले गणेशकै भाइले रेस्टुरेन्टका रूपमा विकास गरेका छन् ।
बुबाले आगोमा किट्ली बसाल्दै भनेका कुरा अहिले पनि गणेशको मानसपटलमा खेलिरहन्छ, ‘हामी त चिया बेच्ने भयौँ, तँचाहिँ ठूलो मान्छे हुनू ।’
‘त्यसबेलाको सन्दर्भमा उहाँहरूले भनेको कुरा ठीकै थियो होला । तर, म चियावाला नै बनेँ । तैपनि, उहाँहरूलाई मप्रति गर्व नै छ’, गणेश भन्छन्, ‘फेरि ठूलो मान्छे भनेको के हो ? मैले त ४ वटा चलचित्र बनाएँ, चाहेको भए अरू कुनै पेसामार्फत पनि आफूलाई बचाउन सक्थेँ ।’
चियाप्रति उनको अनुराग वास्तवमै चित्ताकर्षक छ ।
उनी चियावाला हुनुको कहानी पनि अनौठो रहेछ । चिया बेच्नेको छोरा भनेर उनले बाल्यकालमा खुबै अपमान सहनुपर्‍यो । ‘विद्यालयमा पनि मप्रति कतिपय साथीहरूले गर्ने व्यवहार अत्यन्तै तुच्छ हुन्थ्यो । कारण यही थियो कि म एउटा चिया बेच्नेको छोरा थिएँ’, उनी केही भावुक लागे ।
सानैदेखि उनी टीभीमा चलचित्र हेर्न मनपराउँथे । उनीभित्र चलचित्रकर्मी हुने हुटहुटी सलबलाइरहेको थियो । चलचित्रसम्बन्धी अध्ययन गर्न भारतको मुम्बई गएका बेला उनी त्यहाँ खोलिएका चिया क्याफेहरू देखेर छक्क परे र सोचे, ‘मलाई चियावालाको छोरा भनेर अपमान गर्नेहरू यहाँ आए भने के सोच्लान् ?’
त्यहाँ चियाका अनेक प्रकार पाइने अत्याधुनिक चियापसलहरू उनले देखे ।
मुम्बई बसुन्जेल उनले त्यहाँका अत्याधुनिक चिया पसलहरूबारे बुझे, जानकारी लिए । त्यसपछि पनि उनले लामो समय चियासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरे । २ वर्षअघि अर्थात् २०७५ सालमा त हो उनले चियावाला क्याफे खोलेको !
‘फिल्म बनाउन र चिया बनाउन कुन मज्जा ?’, मैले सोधेँ ।
उनले कुटिल जवाफ फर्काए, ‘फिल्म र चिया दुवैमा जति कला भर्न सकियो, त्यति उत्कृष्ट र मीठो हुने रहेछ । कला भर्न सक्नु भनेको आफ्नो सिर्जनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्नु हो । त्यसैले दुवैमा आआफ्नै स्वादको मज्जा छ ।’
श्रीमती देवकीले उनलाई दिएको साथ अझ लोभलाग्दो छ । ‘श्रीमती हुन्, प्रश्न गर्न सक्थिन् होला नि– नाम चलेको लेखक, निर्देशक भएर चिया बेच्ने ? अरू कुनै काम गरौँ । तर, उनले कहिल्यै यसो भनिनन् बरु बिहान ९–१० बजे बुद्धनगरस्थित घरबाट खाना टिफिनमा बोकेर आउँछिन् । काम गर्ने बहिनीहरूसँगै बसेर खान्छौँ । दिनभर पसलमा मसँगै हाँसीखुसी काम गर्छिन् । यसैलाई राम्रो बनाऔँ भनेर हौसला दिन्छिन्’, गणेश भन्छन् ।
‘चिया र फिल्ममध्ये एक छाड्नुपर्‍यो भने कुन छाड्नुहुन्छ ?’, मलाई लाग्यो, अलिक अप्ठ्यारो प्रश्न गरेँ । तर, उनले वरिपरिको टेबुलमा बसेका चलचित्रकर्मीलाई देखाउँदै जवाफ फर्काए, ‘मैले चिया पसल वा चलचित्रमध्ये एक क्षेत्र छाडेँ भने ऊ ती साथीले पनि मलाई छाडिदिन सक्छन्, जसले मलाई हौसला र साथ दिइरहेका छन् । समय मिलाएर दुवै क्षेत्रमा सक्रिय रहेँ भने मलाई थुप्रै साथीको साथ र हौसला मिल्नेछ ।’
उनको चिया पसललाई ‘चलचित्रकर्मीहरूको अड्डा’ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । बिहानैदेखि त्यहाँ चलचित्रकर्मीहरू जमघट हुँदा रहेछन् ।
‘चिया त गज्जब मीठो रहेछ’, क्यामेरा पर्सन सुशील दाइ बीचमा बोले । ‘कुरा भइरहेको बेला नबोलेको भए हुन्थ्यो नि !’, मनमा लाग्यो ।
त्यही बेला गणेशले प्रतिक्रिया जनाए, ‘दाइ, तपाईंले पिउनुभएको घनश्याम चिया हो, जुन मेरो बुबाको नाममा छ ।’
म तत्कालै पछुताएँ, ‘सुशील दाइले बीचमा बोलिदिएकाले मैले नयाँ कुरा थाहा पाएँ कि गणेशले आफ्ना बुबाको नाममा चियाको नाम जुराएका रहेछन् । थ्याङ्क यु सुशील दाइ !
‘घनश्याम चियाको विशेषता के हो ?’, मैले प्रश्न गरेँ ।
‘उत्कृष्टमध्ये चियाको प्रकार हो, घनश्याम चिया’, उनले उत्तर दिए, ‘यो दूधैदूधले बनेको हुन्छ, चियापत्ती पनि उत्कृष्ट हुन्छ ।’
त्यसो त उनको क्याफेमा ५० भन्दा बढी स्वादका चिया चाख्न पाइन्छ, जसको मूल्य ४० रुपैयाँदेखि प्रतिकप ८–९ सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।
उनी आफ्ना बुबाआमालाई अत्यन्तै प्रेम गर्छन् । त्यसैले उनले चलचित्र कम्पनी टुका इन्टरटेन्टमेन्ट आफ्नी आमाको नामबाट राखेका छन् । उनकी आमाको नाम टुकादेवी हो । चियाको नाम घनश्याम राखेका छन्, जुन बुबाको नाममा छ ।
यति मात्र कहाँ हो र ! क्याफेभित्र एक जोर जुत्ता झुन्ड्याइएको छ, जुन उनको भान्जाको जुत्ता हो रे ! ‘योचाहिँ भान्जाप्रतिको माया हो’, उनले भने ।
गणेशदेवको क्याफे बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म खुल्छ । ‘हामीसँगै दाइ र भाउजू पनि दिनभर काम गर्नुहुन्छ’, क्याफेमै काम गर्ने एउटी युवतीले भनिन्, ‘उहाँहरूसँग काम गर्दा हामीलाई पनि ऊर्जा, उत्साह र खुसी मिल्छ ।’
नेपालमा मात्र होइन, चियाका सौखिनहरू विश्वमै छन् । यद्यपि, चियाले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भनेर नपिउनेहरू पनि थुप्रै छन् । पछिल्लो समय म यस्तै सोच्ने मानिसहरूमध्ये एक हुँ । तर, गणेशका अनुसार चियाको पत्तामा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र फाइटोकेमिकल्सले मानिसको रोग प्रतिरोधी तन्त्रलाई मजबुद बनाउँछ ।
‘हामीले चिया बनाउन नजानेका कारणले असर खेपिरहेका हुन सक्छौँ । तर, चियाका फाइदा थुप्रै छन्’, उनले भने, ‘चिनी कम र पत्ता राम्रो छ भने चियाले धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ ।’
हट्टाकट्टा देखिने गणेश दिनमा १५–१६ कपसम्म दूधचिया पिउँछन् रे !
‘तपाईं आफैं लेखक, अक्सर अरूका कथा लेख्नुहुन्छ । तर, मैले यहाँ तपाईं र वरिपरिका थुप्रै कुराभित्र कथा मडारिइरहेको देखेको छु । यी कुरालाई फिल्ममा उतार्ने विचार छैन ?’, मैले अर्को प्रश्न गरेँ ।
‘म अरूका कथाभित्र डुब्छु । त्यसबेला लाग्छ, म नै पात्र हुँ । त्यसैले अरूको दुःख आफ्नो जस्तो लाग्छ’, उनले कुरा घुमाए, ‘तपाईंले मेरो दुःख र अनुभव लेखिदिनु हुँदै छ, म तपाईं वा अरू कसैको जीवन भोगाइ र सङ्घर्षलाई फिल्ममा उतार्छु ।’
मैले फेरि प्रश्न गरेँ, ‘चलचित्रमा भविष्य नदेखेर हो वा असफल भएर चिया क्याफेमा लाग्नुभएको ?’
‘म दोहोर्‍याएर भन्दै छु कि मेरा लागि यो सोख र बाध्यता दुवै हो । तर, चलचित्रमा भविष्य नदेखेर मैले चिया बेच्न थालेको होइन, न चिया बेचेर धनी हुन नै खोलेको हुँ । बस्, यो मेरो मनले अह्राएको बाटो हो, जहाँ म हिँडिरहेको छु ।’
वास्तवमा गणेश ‘बिन्दास टाइप’का व्यक्ति लाग्छन् । उनलाई कसले के भन्छ, मतलब छैन । ‘जिउनका लागि सङ्घर्ष गर्ने तपाईंले हो, अप्ठ्यारो पर्दा आफूलाई मुक्ति दिलाउनुपर्ने तपाईंले नै हो । चुनौती चिर्नुपर्ने तपाईंले हो । त्यसो भए कसले के भन्छ, तपाईं किन मतलब गर्नुहुन्छ ?’, गणेश प्रश्न गर्छन्, ‘म चिया बेचेरै सन्तुष्ट छु भने मलाई अरूले भनेका आफ्नो इच्छाइतरका कुराले के फरक पार्छन् ?’
गणेशसँग चियाको साइनो आश्चर्यलाग्दो छ । उनी चियाका अम्मली हुन् । सानोमा कुनै कुराले चोट परेर रुँदा उनलाई चिया दिनेवित्तिकै चुप लाग्थे रे ! अहिले पनि उनी चिया अगाडि राखेरै गफको थालनी गर्छन् ।
‘कुनै कुरा लेख्नु वा सोच्नुअघि चिया पिएँ भने नतिजा केही सकारात्मक नै आउँछ’, उनी भन्छन् ।
अर्को क्याफे खोल्ने तयारी
लकडाउनका कारण धेरैको व्यापार, व्यवसाय चौपट भएको छ । तर, गणेश भने पर्यटकीय क्षेत्र झम्सीखेलमा अर्को क्याफे खोल्ने तयारीमा छन् । ‘चाँडै अर्को आउटलेटको तयारीमा छु’, उनले भने ।
उनी अहिले मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाग्मती करिडोरको चिया पसलबाट कमाउँछन् ।
गणेशका एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरो ‘कुकिङ’मा बढी रुचि राख्छ’, उनी भन्छन्, ‘छोरी आर्टमा अलिक अग्रसर छिन् । फोटो खिचेर मलाई देखाउन आउँछिन् । तर, यी दुवैलाई जीवनमा आफ्नो भविष्यबारे निर्णय लिन म स्वतन्त्र छाडिदिन्छु ।’
उनी क्याफेको नयाँ आउटलेटसँगै अर्को चलचित्रका लागि काम गरिरहेका छन् । ‘झम्सीखेलमा अर्को क्याफे खोल्ने योजना छ । सम्भवतः चाँडै अर्को चलचित्रको काम पनि सुरु गर्नेछु’, उनले सुनाए, ‘चिया र चलचित्र मेरो जीवनका २ पाटा हुन् । जसरी पनि समय व्यवस्थापन गरेर दुवै क्षेत्रलाई अघि बढाउँछु ।’
कुनै पनि क्षेत्र वा कामलाई सानो सम्झिन नहुने उनको बुझाइ छ । ‘सानोमा म आफूलाई चिया पसलेको छोरा भएकामा अभागी ठान्थेँ । मेरा बुबाआमामा छोराले चिया पसल गर्नु नपरोस् भन्ने चहना थियो । समय परिवर्तन भयो, आफूलाई अभागी ठान्ने मैले चिया पसलेको छोरा/नाति भएकामा गर्व गर्न थालेँ’, उनी भन्छन्, ‘रिसर्च गरेर खानदानी पेसालाई आधुनिक बनाएर त्यसैमा होमिएँ । अरूलाई देखाउनका लागि केही पनि नगरौँ । ज्यादै दुःख पाइन्छ, असफल भइन्छ । आफूले जानेको र चाहेको काम मिहिनेतका साथ गरियो भने सफलता र सन्तुष्टि एकसाथ मिल्छ ।’
आधा पिइसकेको मेरो ब्ल्याक टी कुरैकुरामा सेलाइसकेछ । गणेशलाई भेट्न कलाकर्मीहरू पर्खिइरहेका थिए । अब चिया बनाउनदेखि इष्टमित्र भेट्नेसम्मको उनको काममा धेरै बाधा पुर्‍याउन मन लागेन ।
उभिएर फेरि क्याफेका भित्ता र पिलरतिर हेरेर केहीबेर घोत्लिएँ । एकैछिनमा कालो गेटबाट बाहिरिएँ, यसो मास्तिर हेरेँ, त्यही गेटमाथिको किट्लीले मलाई ‘बाईबाई’ गरिरहेको थियो तर पुनःपुनः आउनका लागि निम्तो गर्दै ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १७, २०७७, १३:५४:००
कोरोनाको नयाँ प्रजाति पहिलेको भन्दा धेरै खतरनाक : बोरिस जोनसन2min read
नेपाल एयरलाइन्सले मलेशियाबाट १८ नेपालीको शव ल्यायो3min read
मुखमा गणतन्त्र, रगतमा राजतन्त्र
कालाे माछापुच्छ्रेमा कावा खाइरहेको सेताे गिद्ध3min read
इन्टर्भलसम्म पनि नबाँची बिदा हुने प्याराे साथीकाे नाममा5min read
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि नयाँ आवेदन माग2min read
ज्येष्ठ नागरिक साक्षर कक्षालाई २० हजार डलरको युनेस्को पुरस्कार3min read
केयूको उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस 1 min read